विचरा हाम्रो देश ! एन्फा पदाधिकारीको मासिक तलब एक लाख खेलाडीको १८ हजार – Dainik Sangalo
विचरा हाम्रो देश ! एन्फा पदाधिकारीको मासिक तलब एक लाख खेलाडीको १८ हजार
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, कार्तिक ०५, २०७८ समय: १२:२१:५१
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीको मासिक तलब १८ हजार भएको खुलासा भएको छ। राष्ट्रिय फुटबल टोलीका कप्तान किरण चेमजोङले खेलाडीको मासिक तलब १८ हजार रहेको जानकारी दिएका छन्।यस्तै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) पदाधिकारीको तलब भने मासिक करिब एक लाख रहेको छ। ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा प्रसारण हुने कार्यक्रम जिबेटमा कुरा गर्दै एन्फा महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले आफ्नो तलब करिब एक लाख भएको स्वीकार गरेका छन्।
त्यसपछि कार्यक्रम प्रस्तोता निमेश बन्जाडेले खेल मैदानमा देशका लागि लड्ने, गाली खाने र ताली खाने खेलाडीलाई चाँहि त्यति थोरै तलब र एन्फा पदाधिकारीलाई त्यति धेरै तलब यो सुहाउँदो भयो त ? भनेर प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा महासचिव तुलाधरले एन्फामा कोषाध्यक्ष र महासचिवले मात्र सो मात्रामा तलब बुझ्ने बताएका थिए।
अन्तरवार्तामा कप्तान चेमजोङले खेलाडीहरुका लागि सेवा, सुविधाहरु कम भएको स्वीकार गरेका थिए। साफ च्याम्पियनसीपको फाइनल खेलमा ५ मिनेटमा टोली चुक्दा हार बेहोरेको पनि उनले बताएका छन्।
लालमटिया ढुंगेबजारबाट १० किलोमिटर जति टाढा पर्छ। उनीहरूले ट्युबमै बल्छी, पानी परे ओढ्ने बर्साती, खाना पकाउने भाँडाकुँडा झोलामा बोकेका थिए। मोबाइल उनीहरूसँग थिएन। लालमटिया पुगेपछि उनीहरूले साना बल्छीका लागि गड्यौला खोजे। ठूलो बल्छीमा साना माछा नै चारो बनाएर हाल्ने गरेका थिए। बेलुका ६ बजेतिर बल्छी कर्णालीमा थापेर ज्वाइँले हेर्ने जिम्मा पाए। खडकबहादुर र भतिजा नदीबाट अलि माथि अग्लो ठाउँमा भात पकाउन लाग
Last Updated on: October 22nd, 2021 at 12:21 pm